China Desktop Manual Rockwell Hardness Tester HR-150A orinasa sy mpanamboatra | KAIRDA
Ny Desktop Manual Rockwell Hardness Tester HR-150A dia ampiasaina indrindra hamaritana ny hamafin'ny Rockwell amin'ny metaly ferrous, metaly tsy ferrous ary fitaovana tsy metaly. Ny haingam-pandeha amin'ny tsindry fanandramana dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaovana buffering, ary ny fiovan'ny tsindry azo amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny tsindry misafidy kodiarana tanana. Ny fiasan'ny tester dia mora be, raha tsy miovaova kosa ny zava-bitany ary azo ampiasaina amin'ny karazany maro ilay tester. Famaritana modely HV-30T fanerena voalohany 98 ...
Ny Desktop Manual Rockwell Hardness Tester HR-150A dia ampiasaina indrindra hamaritana ny hamafin'ny Rockwell amin'ny metaly ferrous, metaly tsy ferrous ary fitaovana tsy metaly.
Ny haingam-pandeha amin'ny tsindry fanandramana dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaovana buffering, ary ny fiovan'ny tsindry azo amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny tsindry misafidy kodiarana tanana. Ny fiasan'ny tester dia mora be, raha tsy miovaova kosa ny zava-bitany ary azo ampiasaina amin'ny karazany maro ilay tester.
Fanerena voalohany 98N,
Herin'ny fitsapana tanteraka 588N, 980N, 1471N,
Famaritana ny indenter Indry diamondra connexant Rockwell, indenter baolina 1,5875 mm
Haavo avo indrindra amin'ny spim (mm) 170mm
Ny halaviran'ny ivon'ny Indenter mankany OuterWall 165mm
Masinina (DXWXH) (mm) 510 × 230 × 750
HRA 20 ~ 88
HRB 20 ~ 100
HRC 20 ~ 70
Rehefa mandrefy dia mifidiana azafady penetrator sy ny herin'ny fitsapana araka ity tabilao manaraka ity.
Total Force Force N (kgf)
Mariky ny refy fandrefesana
Baolina vy Φ1.5888mm
Diamondra 120 °
Izy io dia ampiasaina amin'ny fandrefesana ireo metaly, ny hamafiny dia mihoatra ny HRC 70 (toy ny firaka karbida tungsten, sns.) Ary koa amin'ny fandrefesana ireo fitaovana matevina sy ireo fitaovana efa voavono.
Scale C: ampiasaina amin'ny fandrefesana ny hamafin'ny faritra vy voadinika amin'ny hafanana.
Scale B: Ampiasaina amin'ny fandrefesana metaly mafy kokoa na afovoany ary faritra vy tsy milamina.
1 Rockwell Hardness Tester 1Set
2 Anvil fisaka lehibe 1
3 lalotra kely fisaka 1
5 Diamond pentrator 1
Mpitrandraka baolina vy Φ1.588mm 1
Baolina 7 Φ1.588mm 5 ares fitsitsiana）
8 Rockwell standard block 80-88HRA 1
9 Rockwell standard block 85-95HRB 1
10 Rockwell standard block 60-70HRC 1
11 Rockwell standard block 35-55HRC 1
12 Rockwell standard block 20-30HRC 1
13 mpamily visy lehibe 1
Mpamily volo kely 1
15 boaty mpanampy 1
16 Ampinga vovoka 1
Fampianarana miasa 1
18 fanamarinana 1
Lisitry ny fonosana 1
FOMBA FANJAKANA NY FITSARANA MAFY
1.Raha tsy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny tester dia tokony hosaronan'ny fonony tsy misy vovoka izy.
2.Fenoy menaka masinina eo amin'ny faritra mifandray amin'ny visy (26) sy ny handwheel (27).
3. Alohan'ny hampiasana ny tester dia ataovy diovina ny tampon'ny tampon'ny visy (26) sy ny tampon'ny tendrony ambony.
4.Raha ny lanjan'ny saro-pantarina voalaza dia hita fa diso be loatra:
1) Esory ny ravina ary zahao raha madio ny tampony nifandray tamin'ilay visy
2) Hamarino raha manohana ny ravina ilay palitao miaro.
3) Hamarino raha simba ilay penetrator.
5.Raha mampihatra ny hery fitsapana lehibe dia mihodina haingana be ilay mpanondro tondro eo am-piandohana ary miadana tsikelikely, midika izany fa kely loatra ny menaka masinina ao anaty buffer. Amin'ity tranga ity, atsangano ny gasket tsapa eo amin'ny faran'ny buffer (7), fenoy menaka milina madio madio mandritra izany ary atosika ary sintomy im-betsaka ny tahony (15) (16) hampisondrotra ny piston indraindray. , ary reraka tanteraka ny rivotra avy amin'ny buffer mandra-pahatongan'ny piston hidina hatrany ambany ary hidina avy ao ny menaka.
6. Ampiasao ny vavahady fanandramana mahazatra nomena ny mpanapa-maso mba hijerena indraindray ny maha-marina ny fitsapana mafy.
1) Diovy ny lavarangana sy ny sakana mahazatra ary tohizo ny fizahan-toetra amin'ny alàlan'ny velaran'ilay sakana. Tsy avela hizaha toetra ny faritra misy azy io.
2) Raha toa ka lehibe kokoa ny lesoka amin'ilay sanda voalaza, ankoatran'ny manamarina araka ny laharana faha-4 amin'ity toko ity dia zahao raha misy burrs ny faritra manohana ny tsoraka fanandramana mahazatra. Raha amin'ity tranga ity dia vonoy amin'ny vato menaka.
3) Raha ny fanandramana amin'ny bara mahazatra amin'ny toerana samihafa dia tokony hisintona ny tampon-tanàna ny sakana fa tsy esorina amin'ny lavarangana.
Previous: Portable Ultrasonic Hardness Tester KH270W
Manaraka: Digital Bench Rockwell Hardness Tester HRS-150
Fitsapana ny hamafin'ny faharetan'ny durometra Shore A S ...
Shester D Durometer Hardness Tester
Portable Ultrasonic Hardness Tester KH270W